कोरोना भाइरस : प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के खाने? यस्तो छ डब्ल्यूएचओका सुझाव -
कोरोना भाइरस : प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के खाने? यस्तो छ डब्ल्यूएचओका सुझाव
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ३०, २०७८ समय: १५:१३:२६
एजेन्सी : कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन दिनानुदिन बढिरहदा यसका कारणले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने धेरै मानिसहरु संक्रमित हुनुपरेको छ। यद्यपि, तपाईंले यी सबै चीजहरूको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन । चाहे कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन होस् वा डेल्टा । यसका लागि एउटा हतियार सधैं काममा आउनेछ, त्यो तपाईको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता हो। यदि तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ र तपाई ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनुभयो भने पनि तपाई सजिलै निको हुनुहुनेछ।